Shirkada DP World oo sheegtay in uu socdo baaritaan ku saabsan dilka madaxii dekada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandShirkada DP World oo sheegtay in uu socdo baaritaan ku saabsan dilka madaxii dekada Boosaaso
Shirkada DP World oo sheegtay in uu socdo baaritaan ku saabsan dilka madaxii dekada Boosaaso
February 5, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Paul Anthony Formosa. [Sawir Hore]
Dubai-(Puntland Mirror) Shirkada DP World ayaa sheegtay in uu socdo baaritaan ku saabsan dilka madaxii dekada Boosaaso.
“Arrimaha dhacdada waxaa hadda baaraya P&O Ports iyo haayadaha Puntland,” shirkada ayaa sidaas ku tiri qoraal ay soo dhigtay bogga Twitter-ka.
“Iyado oo ay hadda socoto baaritaan, P&O Ports ma ay samayn doonto wax jawaab ah oo dheeri ah ilaa dhabta ku hareeraysan dhacdada la ogaado.” Ayay ku sii sheegtay qoraalkeeda.
Dhanka Puntland, Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo shir jaraai’d qabtay saacado yar kadib dilka ayaa sheegay in la sameyn doono baaritaan, waxaana uu xusay in tilaabo adag laga qaadi doono cid walba oo ku lug yeelata arrinta.
Paul Anthony Formosa, oo u dhashay jasiiradda Malta, ayaa waxaa toogasho ku dilay nin dhalinyaro ah oo baastoolad ku hubeysan meel dekada u dhow shalay oo Isniin ahayd.
Ku xigeenkiisii iyo labo kamid ah ilaaladiisa ayaa ku dhaawacmay weerarka.
Sidoo kale ninkii dilka ka dambeeyay oo dhaawac lagu qabtay ayaa xalay ku geeriyooday isbitaalka magaalada Boosaaso.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada dilkaas.
Wuxuu maamulayay dekeda tan iyo dabayaaqadii 2017, markii P&O Ports oo ay leedahay DP World ay heshiis la saxiixatay dowladda Puntland si ay u horumariso una maamusho dekeda.
Sida ay ku warameen warbaahinta Malta, Paul ayaa kasoo shaqeeyay dekada Lattakia ee dalka Suuriya kahor inta uusan imaan magaalada Boosaaso ee Puntland, Soomaaliya.
Waxa uu ka tagay labo gabdhood iyo xaas, sida ay sheegeen warbaahinta Malta.
February 8, 2019 Ciidamada booliiska Puntland oo howlgal amni ka bilaabay gudaha magaalada Boosaaso
February 4, 2019 Maamulihii shirkada DP World ee dekada Boosaaso oo la dilay
July 24, 2019 Puntland oo sheegtay in dhawaan ay sii deyn doonto faahfaahin dheeri ah oo ku saabdan dilkii maareeyihii shirkada DP World ee dekada Boosaaso
February 18, 2019 Paul Formosa oo ahaa madaxii dekada Boosaaso ee la dilay oo aas loogu sameeyay dalkiisii
Madaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay dilkii loo geystay maamulihii DP World ee dekada Boosaaso
Madaxa Taliska Mareykanka ee Afrika oo sheegay in duqeymaha Mareykanka aysan joojin doonin Al-Shabaab
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hadlay sababta keentay in Puntland aysan ka qeybgalin shirka “Somali Partnership Forum”. Isaga oo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada Boosaaso oo uu xalay la yeeshay [...]
Al-Shabab killed captive Kenyan soldier
Mogadishu-(Puntland Mirror) The Al-Shabab armed group has released a video showing the execution of a captive Kenyan soldier in what is called an attempt to influence Kenya’s presidential election on Tuesday. The SITE Intelligence Group, which monitors [...]
Musuqmaasuq weyn oo hareeyay doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya
Garoowe-(Puntland Mirror) Kiisas musuqmaasuq oo aad u weyn iyo cabsi gelin codeeyaha ayaa hareeyay doorashooyinka hadda socda ee baarlamaanka Soomaaliya, sida uu warbaahinta u sheegay hanti-dhowraha guud ee Soomaaliya. Laaluush u dhaxeeya $1,000 – $5,000 [...]